Xildhibaanada Baarlamaanka Cusub Ee Dowladda Federaalka oo Mooshinkii Ugu Horreeyay Diyaariyay.
Monday January 02, 2017 - 08:12:28 in Wararka by Super Admin
Xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Dowladda Federaalka ayaa ku dhawaaqay in ay diyaarinayaan mooshinkii ugu horreeyay oo ka dhan ah guddiga doorashooyinka.
Qaar katirsan guddiyada Baarlamaanka cusub oo warbaahinta lahadlay ayaa ku dhawaaqay in ay ku mashquulsanyihiin mooshin ay ku diidanyihiin xayiraad lagusoo rogay 5 xildhibaan kuwaasi oo loo diiday in ay ka qeyb galaan doorashooyinka soo socda.
Xildhibaanada oo Muqdisho ku kulmay ayaa ugu baaqay guddiga doorashooyinka in ay xayiraadda ka qaadaan shanta xildhibaan oo shaqada laga hor istaagay.
Dawaaqiidda ayaa dib ugu laabtay dhaqankii lagu yaqiinay ee ahaa ‘Mooshin’ waana mashruuc ay marwalba ku raadsadaan dhaqaalo haddii si kale loo eegana waxaa billaawday Fowdadii markii hore loosoo dhisay baarlamaanka oo ah in lagu maaweeliyo madaxda dowladda Federaalka marmarka qaarna dowladaha shisheeye ay ku sharciyaystaan boobka kheyraadka dalka.
Dhammaan xildhibaanada Baarlamaanka ayaa markii ay kusoo baxayeen doorashooyinkii ka dhacay maamul goboleedyada waxay bixiyeen lacago laaluush ah oo ay siiyeen odayaashii soo xulayay hadda ayay ku qasbanyihiin in lacago laaluush ah ay ka helaan kuwa xil doonka ah si ay isaga gudaan lacagihii daynta ahaa oo ay soo galeen.